Volana oktobra : ho avy hanolotra seho maromaro i Lôlô Sy… | NewsMada
Volana oktobra : ho avy hanolotra seho maromaro i Lôlô Sy…
Par Taratra sur 14/09/2016
Tonga indray ny fotoana nifanomezana. Efa miandry fatratra an’i Lôlô ny mpankafy azy eto an-tanindrazana…
Volana oktobra… Mby an-tsaina avy hatrany ilay hira « Zakaranda », an-dry Lôlô. Amin’io volana ambony io tokoa ny fotoana hifanomezan’i Lôlô Sy… ireo mpankafy azy eto an-tanindrazana. Fantatra mantsy fa hisy ny seho maromaro izay hotontosain-dry Lôlô Sy, ary haka endrika fitetezam-paritra mihitsy izany.
14 sy 15 oktobra ny fotoana voalohany, ho an’ireo mpankafy eto Antananarivo. Samy hotontosaina etsy amin’ny CCEsca Antanimena avokoa ireo seho roa ireo. Hanomboka amin’ny 7 ora alina ny zoma, raha toa ka amin’ny 3 ora tolakandro kosa ny asabotsy.
Any Toamasina kosa ny fotoana manaraka, ny 20 oktobra, ao amin’ny “La Famille” Salazamay, manomboka amin’ny 7 ora alina. Araka ny fampitam-baovao, seho natao ho fitadiavam-bola hoentina hanampiana ireo ankizy sahirana ao Toamasina io, izay homanin’ny fikambanana Bogota Tamaga. Tetikasa kasain’i Lôlô hatao hatrany isaky ny fandalovany rahateo ny fanampiana ny mpiara-belona, ka nifanandrify tamin’izany ity seho iray ity.
Tsy tapitra hatreo, fa mbola hitohy any Antsirabe ihany koa ny fampisehoana miaraka amin’ny asa sosialy. Manome fotoana ao amin’ny Impérial Hôtel ry Lôlô ny 22 oktobra manomboka amin’ny 8 ora alina. Seho an-kalamanjana kosa ny tohiny ny 23 oktobra, ao amin’ny kianjan’ny Saint Joseph, manomboka amin’ny 2 ora. Samy fitadiavam-bola hataon’ny Rotary Club Antsirabe avokoa ireo.
Marihina fa i Lôlô Sy… Farah, Bebey, Benny, Sammy, Sefo ary Bim no hiara hanatontosa ny seho rehetra amin’ity indray mitoraka ity. Mialoha izany rehetra izany, efa afaka maka fofompofony amin’ny “revy Lôlô” ny mpankafy ny zoma 16 septambra izao, manomboka amin’ny 9 ora alina etsy amin’ny Trass Tsiadana. Ry Benny, Bebey, Sammy ary Sefo ihany aloha no hanatontosa izany.